Wariye Maxamed Cabdulwahaab Abuuja oo Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida maanta la horgeeyay - Awdinle Online
Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka sida ayaa maanta oo Isniin ah kuna beegan 3-da Agoosto 2020 la horgeeyay Wariye Maxamed Cabdulwahaab Nuur (Abuuja) oo u xiran Dowladda Federaalka.
Abuuja ayaa laga xiray Degmada Shibis sida ay ehelkiisa xaqiijiyeen, waxaana uu u xirnaa Taliyaha Nabadsugidda Degmadaas sida uu warbaahinta u sheegay Aabihiis Cabdulwahaab Nuur.
Isu soo baxyo ay sameeyeen Bahda Warbaahinta waxa ay marar is xig-xiga ku dalbadeen in Wariyaha lasii daayo oo Ehelkiisa walwal ka muujiyeen xarigiisa, haddii dambi loo heysto la horgeeyo maxkamad.
22-kii April oo haatan laga joogo 102-Maalmood, Wasaaradda Warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya waxa ay baahisay in Abuuja loo heysto in uu katirsan yahay Al-Shabaab, kana qaybqaatay dil ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Waalidka Wariyaha ayaa arrintaas gaashaanka ku dhuftay, wixii xiligaas ka dambeeyay waxaa socday diyaarinta kiiska loo heysto si loo horgeeyo Maxkamadda awoodda u leh gelista kiiskaan.
Maanta ayaa la horgeeyay Maxkamadda Ciidamada qalabka sida, waxaana madasha ku sugnaa Wakiilo Warbaahinta ka socday si ay goobjoog uga noqdaan eedeynta Xeer ilaalinta ka difaacidda kiisaska ka dhanka ah.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad ee CQS Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa fadhiga Maxkamadda ka sheegay in la dhageystay kiis dacweedka Abuuja, Go’aanka Maxkamaddu ka gaarto dib ka soo sheegi doonaan.
Previous articleWararkii u dambeeyay Shirweynaha Wadatashiga Beelaha Mudullood
Next articleEx Madaxweyne Cali Mahdi: “Dowlad fiican haddaan waayo qorigeygii caddaa weli xabaddii way ku jirtaa”